Relationship | 9han News
ချစ်တယ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့မြတ်နိုးမှုနဲ့ကိုယ်တို့တွဲခဲ့ကြတာ။ အချိန်ကြာတော့ အေးစက်စက် ဆက်ဆံရေးက ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလား။ ချစ်ခြင်းဟာ ပူလောင်တတ်ပါရဲ့နှင့်အပူခံ ဆုပ်ကိုင်ထားမိတာဟာဆုံးရှုံးရမှာကို ကြောက်လို့ပေါ့။ ဆန်ကျင်ဘက် ခံစားချက်တွေဟာနှလုံးသားကို နာကျင်ရတာထက်ပိုပါတယ်။ Advertisements ဘဝတခုလုံးကိုပါ ပျင်းရိချောက်သွေ့စေခဲ့တာ။ [irp] အားအင်တွေကုန်ခမ်းစေလိုက်တာ။ Advertisements ဒဏ်ရာမဲ့ အနာတွေက သွေးစိမ်း‌တွေစီးကျစေခဲ့တာ။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုစရမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းစကိုပါ ပျောက်ပျက်သွားနိုင်တာမျိုး။ ရိုက်နှက်တာထက် ပိုနာကျင်ရပါတယ်။ ဘာပြောပြော
ယောကျာ်းဖြစ်စေ မိန်းမဖြစ်စေ တကယ်ချစ်ကြတယ်ဆိုရင် အတိတ်က အမှားတွေကို လက်ညှိးထိုး ပြောဆိုတာမျိုး မလုပ်ရဘူး
တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် သူမှားနေရင်တောင်မှလက်ခံနားလည် ပေးရမှာပဲ။ ချစ်သူ/ရည်းစားရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တစ်ယောက်သိက္ခာကို တစ်ယောက်ကကာကွယ်ပေးရမယ်။ အပုပ်မချသင့်ဘူး။ လူတိုင်းဟာ အတ္တသမားချည်းပဲ။သူ့အတ္တကို ထိပါးလာတာ လူတိုင်းမကြိုက်ကြဘူး။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ဒီအချက်ကသိပ်အရေးကြီးတယ်။ဆိုပါတော့… ထောင်ကျနေတဲ့ လူတွေကိုခင်ဗျားမှားတယ်လို့ သွားပြောရင်ဘာပြန်ပြောမယ်ထင်လဲ။ Advertisements “တကယ်က ကျွန်တော် လူမှားပြီး တရားစွဲခံခဲ့ရတာပါ”“တရားသူကြီးက လာဒ်စားလို့ပါ” “ကျွန်တော် ဘုရားမကြိုက်တာ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး”ဆိုတဲ့အဖြေပဲ ပေးကြလိမ့်မယ်။လူ၁၀၀မှာ ၈၀လောက်က ဝန်ခံရဲကြမှာ
တစ်ဖက်သတ် ကိုယ့်အနားမှာ မပျော်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဆွဲထားရတာ အတော့်ကို ပင်ပန်းပါတယ်
တစ်ဖက်သတ် . . . . ကိုယ့်အနားမှာ မပျော်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို . . . ဆွဲထားရတာ အတော့်ကို ပင်ပန်းပါတယ် ။ ရှိနေစေချင်ရုံစိတ်တစ်တည်းနဲ့ မနေချင်တဲ့သူကို ကိုယ့်ဘက်ကချည်း ဆွဲထားမိတာလေ ။ မာနတွေလဲ မထားဖြစ်ခဲ့သလို သိက္ခာတွေလဲ မကျန်တော့တဲ့အထိအောက်ကျနောက်ကျ နိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ဒေါသတွေ ထွက်မိတယ်
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ငွေရှာရုံနဲ့ တာဝန်ကျေပြီလို့မထင်ပါနဲ့
မိန်းမ ရော့ မင်းကြိုက်တာဝယ် ၊ ကြိုက်တာသုံးဆိုတဲ့ စကားထက်…. မိန်းမ အပြင်အတူသွားကြမယ်လေ ပြင်ဆင်လိုက် ၊ ဘာလိုချင်လည်း လိုက်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ၊ စကားအသုံးပြုမှုလေးကပိုနွေးထွေးကျေနပ်စေရတာပါ။ မိန်းမ စားနှင့်ကွာ ဝမ်းမှမဆုံတာဆိုတဲ့၊… စကားထက်…..မိန်းမ ခဏတော့စောင့်ပေးနော်၊ဗိုက်ဆာပေမယ့် အလုပ်မပီးသေးလို့ပါဆိုတဲ့၊စကားအသွားအလာလေးက ပိုစိတ်ကျေနပ်စေရတာပါ။ မိန်းမ အိမ်အသုံးစရိတ်က ကုန်လှချည်လားဆိုတဲ့၊….စကားထက်…….မိန်းမ ကုန်ဈေးနှုန်းအခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ၊..လောက်အောင် ချင့်ချိန်ဝယ်ကြည့်ပေါ့ကွာ…မလောက်ရင်ပြောပေါ့ဆိုတဲ့၊ စကားလုံးလေးတွေရဲ့
ပြုံးနေတိုင်း ပျော်နေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ကျွန်မ မပျော်ပေမယ့် ရအောင် ပြုံးတတ်တဲ့ အကျင့်လေးရှိတယ် နာကျင်ကျင်နဲ့လဲ လှလှပပလေး ပြုံးပြတတ်ဖို့အထိ ကျွန်မ လေ့ကျင့်ထားပါတယ် ။ ပျော်ရာမှာ မနေရ တော်ရာမှာ နေနေရတဲ့ ဘဝမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြုံးရ ပျော်ရတဲ့အချိန်တွေထက် ပျော်အောင် မနည်းနေနေရတဲ့အချိန်တွေကသာ ပိုများခဲ့တာလေ ။ ဒါကိုပဲ ဘဝလို့ ခေါ်တယ်လို့
It's the love that I crave
Should it be your lover who always causes distress?